မေ့လျော့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုBamilékés - Afrikhepri Fondation
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာ 27, 2020
A လွတ်လပ်ရေးရသည့်အချိန်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကင်မရွန်းနိုင်ငံသားများသည် မာဖီးယားဂိုဏ်းfrançafric De Gaulle နှင့် Foccart၊ Bamilikésနှင့်အခြားကင်မရွန်း၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
2 မတ်လပြင်သစ်စစ်တပ်၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် 1960 သည်ကင်မရွန်းစစ်တပ်သည် 8.000 အနီးရှိလက်နက်မဲ့အရပ်သားများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် Yogandima ရွာကိုရိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
သို့သော် 10 နှစ်များ မှစ၍ ပြင်သစ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးသည် 1940 နှစ်များတွင်မွေးဖွားလာသည့်ပြည်ထောင်စုလူ ဦး ရေ၏ကင်မရွန်း (UPC) ၏ဆန့်ကျင်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများသည်လုံးဝသီးခြားဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ UPC သည်ကင်မရွန်းနိုင်ငံအားလုံးတွင်တည်ရှိပါက Bamileke နိုင်ငံတွင်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလွန်ရှိသည်။ အလွန်ထင်ရှားသောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ဇယားကွက်ကိုလိုက်နာရန်ငြင်းဆန်ခြင်း၊ ကိုလိုနီစက်ယန္တရားများ၏စည်းကမ်း၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုတို့ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအလုပ်များသောလူများသည်ကြီးမားသောတီထွင်ကြံဆနိုင်မှုကိုပြသကြသည်။ ၎င်းသည်ခုခံရေးဘာသာစကားတွင်ပင်ထင်ဟပ်ပြသပြီး၎င်းသည်အချက်ပြသူသည်နိုင်ငံရေးအမိန့်၏ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ရွက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ခြင်းကိုစည်းရုံးသည့်ကျယ်ပြန့်သည့်နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးရှေ့တန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တကယ့်လူ့စည်းများ၊ လက်နက်မဲ့၊ သို့သော်ရန်လိုသော၊ စစ်တပ်ထရပ်ကားများပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ကားများနှင့်တွယ်ကပ်နေခြင်းများဖြစ်သည်။ ပုန်ကန်မှုအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ပြောက်ကျားများကဲ့သို့သူတို့၏အမျက်ဒေါသသည် ပို၍ ကြီးမားသည်၊ သူတို့၏လက်များကိုအတူတကွလုနီးပါးလည်ပတ်နေသော်လည်းရှေ့တန်းများ၌အချိန်တိကျအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ ကိုလိုနီဤသူပုန်များကိုနှိမ်နင်းရန်အားစိုက်ထုတ်ပြီး 1955 ရှိ UPC ကိုတားမြစ်သည်။ de Gaulle ၏အနာဂတ် ၀ န်ကြီးဖြစ်သူပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Pierre Messmer သည်သူ၏သွေးကြောပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့်သူ၏အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်တည်ထောင်သူ Ruben Um Nyobe အပါအ ၀ င် UPC ခေါင်းဆောင်များအားသူ၏မွေးရပ်မြေ 13 တွင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 1958 ။
လွတ်လပ်ရေးမှာ 1er ဇန်နဝါရီလ 1960၊ Jacques Foccart သည်သူ၏မိတ်ဆွေ Ahmadou Ahidjo ၏ ဦး ဆောင်မှုဖြင့်ကင်မရွန်းနိုင်ငံတွင်ရုပ်သေးအစိုးရတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူသည်စိတ်ချရသောလူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကိုလိုနီအာဏာသည်ကြာရှည်စွာမဲပုံးထဲတွင်မဲအထုပ်များဖြစ်နေသည်။ ဒီ "အယောင်ဆောင်ပြီးအမှီအခိုကင်းသောလွတ်လပ်ရေး" ၏နေ့တွင်ပင်ငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သည်ပြင်သစ်နှင့်စစ်ရေးအကူအညီပေးရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး Noiret နှင့် Captain Leroy တို့သည်သမ္မတ Ahidjo အားကြီးကြပ်ရန်စစ်ရေးအကြံပေးနှစ် ဦး လာရောက်ကြသည်။ ယခင်စစ်တပ် ၀ န်ကြီး Pierre Guillaumat က "ဒီကိစ္စအတွက် Foccart ကအဓိကကျတဲ့ကဏ္playedမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် Bamileke ပုန်ကန်မှုကို Ahidjo နှင့်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးအရပုန်ကန်မှုကိုလူမျိုးရေးတင်ပြမှုအားဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။
ထို့နောက် Charles de Gaulle သည်အင်ဒိုချိုင်းနားနှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားစစ်ပွဲများ၏ဝါရင့်ဗိုလ်ချုပ်မက်စ်ဘရိုင်ယန်ကတပ်စွဲထားသည့်ခြေလျင်တပ်ရင်း ၅ ရင်းအား“ ဗိုက်ကင်း” ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းတွင်သံချပ်ကာတပ်ဖွဲ့အပြင်ထပ်မံတပ်ဆင်ထားသည့်တပ်သားတစ် ဦး လည်းပါဝင်သည်။ T26 ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်တိုက်လေယာဉ်များ။
ထို့နောက် Dschang တွင်နေထိုင်ပြီး UPC ၏ခံနိုင်ရည်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ဤတောင်တန်းဒေသသို့ဖြန့်ဝေရန်ခေါ်ဆောင်လာသည့် Bamileke သည်ရေတွက်လိမ့်မည်။
"ပြင်သစ်စစ်သားတွေကမြို့ထဲမှာဘာမီလက်စ်တွေစုဆောင်းနေကြတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုကျေးလက်ဒေသမှာပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ညီအစ်ကိုတွေနဲ့အတူမက္ကစ္စကိုသွားခိုင်းတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့သည်လှည့်လည်သွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးပြောက်ကျားများကိုအန္တရာယ်မရှိဘဲဖမ်းမိခြင်းသို့မဟုတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
Dschang အဖွဲ့၏တပ်မှူးဗိုလ်မှူးကြီး Griblin အားကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်"။ သူက“ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကင်မရွန်းနိုင်ငံသားတွေပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြင်သစ်စစ်သားတွေ၊ ငါတို့ဘာဖြစ်လာမှာလဲ ? ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရှိသည်" '
စစ်တပ်ကရပ်ကွက်တစ်ခုမထားဘူး။ အလောင်းများကိုကျေးရွာများတွင်သာမကခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသောအကျဉ်းသားများ၏ ဦး ခေါင်းများကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီမှမတ်လအတွင်း 1960 မှဘာမီလက်ရွာကျေးရွာတစ်ရာမှငါးဆယ့်ခြောက်ရွာမီးလောင်ပြီးမီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုများပျက်စီးခြင်းကိုစေ့စပ်သေချာစွာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ 116 အတန်းများ၊3ဆေးရုံများ၊ 46 ဆေးခန်း၊ 12 စိုက်ပျိုးရေးစခန်းများ၊ 40 တံတားများဖျက်ဆီးခံရမည်။ မည်သူမျှပုဂ္ဂလိကနေအိမ်များဖျက်ဆီးခံရသို့မဟုတ်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုမီးရှို့အစီရင်ခံခဲ့သည်။ သောင်းချီသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသောအရပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာသောအရပ်သားများဘယ်သူမှမရေတွက်နိုင်ပါ။ ငါတို့ဘယ်တော့မှမသိဘူး
Jeannette Kamtchueng ကသူမရဲ့ကောင်မလေးရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကနေသက်သေထွက်ဆိုသည် -
« ညနေပိုင်းတွင်စစ်တပ်ယာဉ်တန်းများပြန်လာပြီး ဦး ခေါင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်သွားပြီးလမ်းမများပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောနေရာများသို့ရောက်သွားသည်။ ကင်မရွန်း၊ 1976 ရှိငါမထွက်ခွာမှီတိုင်အောင်၊ ကျွန်တော့်မိဘများ၏အိမ်နှင့်မီတာသုံးဆယ်အကွာတွင်ရှိသော Bafoussam ၏နှလုံးထဲတွင်ဤအရာအားလုံးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုလည်းကွပ်မျက်ရာအရပျကိုယူဘယ်မှာ။ ခေတ္တနားပြီးတဲ့နောက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့်အကူအညီမရရှိခြင်းတို့ကြောင့်အိမ်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများမရှိဘဲတိုင်းပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ အခြားသူများမှာမူကျူးကျော်သူများဖန်တီးထားသောစခန်းများသို့ရေမလာနိုင်ခြင်း၊ သစ်တောများမရောက်ရှိခြင်းနှင့်စစ်တပ်၏ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကိုခံခဲ့ရသည်။
သူပြန်လာသောအခါအဖေသည်ကိုလိုနီထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဟစ်တလာဝါဒ၏အပူပိုင်းဗားရှင်းကိုသက်သေပြရန်ဘုရားသခင်ဆီသို့ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ သူဟာတစ်ယောက်တည်းပြောခဲ့တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ခဲ့တယ်၊ ထွက်မသွားခဲ့ဘူး။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရှိနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်သူ့လူ၊ ၀ ိညာဉ်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာသေခြင်းစခန်းတွေမှာရှိနေခဲ့တယ်။ အချို့သည်အထူးသဖြင့်သိမ်းပိုက်သူကိုယ်တိုင်သည် 400 000 ၏အသေကောင်ကိုတိုးမြှင့်ရန်ဝံ့ဝံ့ကြ ဘယ်ကာလအတွင်းမှာလဲ ? Mungo ဒေသရှိလူသေများကိုရေတွက်သည် ? အဲဒီမှာလူအများသေဆုံးသွားတယ်။ အခြားသူများကိုတက်တူးထိုးပြီးစခန်းများအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ချွေးတပ်စခန်းများ၌သေဆုံးခဲ့သူများ၊ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရေးစခန်းများ (BBm, Yoko) နှင့်အနောက်ဘက်စစ်စခန်းများရှိသူများလား။ ? ပြီးတော့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ Bangou၊ ငါတို့အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တယ် ? စစ်အပြီးတွင်ဒေသသည်အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့သည် ; 1992 မှာ၊ အမေကကျွန်တော့်ကိုပြောတာကအနောက်နိုင်ငံတွေဟာအရင်ကအတိုင်းမပျောက်ကွယ်ဘဲလူ ဦး ရေထူထပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ယောက္ခမကသူမရဲ့ 8 ညီအစ်ကိုတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ကာလကဘာလဲ ? Napalm ဗုံးကြဲခြင်းနှင့်ဖိတ်ကြားခြင်း၏ကာလသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ကာလ ? »
ဤကာလအကြောင်းကို Bamileke နှင့်စကားပြောရုံဖြင့်ကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဖိနှိပ်မှုများကြောင့်ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းများသည်လုံးလုံးရှုပ်ထွေးပြီးအယ်လ်ဂျီးရီးယားအကျပ်အတည်းကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားသည်။ ဤအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကင်မရွန်းရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဟီဂျိုအစိုးရသည်ပြင်သစ်၏လစာဖြင့်အရာအားလုံးကိုဂရုတစိုက်လျစ်လျူရှုထားသည်။ ပြီးတော့သူမဒီနေ့အထိထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားသောပြင်သစ်နိုင်ငံကိုကြိုတင်ကြံစည်ထားသောရာဇ ၀ တ်မှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် 400.000 Bamilékésသည်အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။« တကယ်တော့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, Bamileke 1955 နှင့် 1965 အကြားသိကြပါပြီ ကိန်းဂဏန်းများအရရှစ်သိန်းမှတစ်သန်းအထိ Hauts-Plateaux ဒေသနှင့် Douala၊ Yaoundé၊ Sangmélima, Ebolowa, Nkongsamba ကဲ့သို့သောအခြားမြို့များတွင်သေဆုံး » Jacques Kago Lélé1]) ။ ပြင်သစ်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုများသည်ဂျီနီဗာရှိ2အောက်တိုဘာ 1960 ၏ UPC ခေါင်းဆောင် Felix Moumiéကိုအဆိပ်သင့်စေနိုင်ခဲ့သည်။
ဒါကအဘယ်သို့မိန့်င် Francois-Xavier Verschave :
"Sdece Africa ၀ န်ဆောင်မှု (ပြင်သစ်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုများ) သည်ကင်မရွန်းနိုင်ငံ၏လက်အောက်ခံSédocကိုမွေးဖွားပြီးပညာပေးသည်။ Jean Fochivé၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်၎င်းသည်ဆိုးရွားလှသော" ထိရောက်မှု "ကြောင့်လူသိများလာလိမ့်မည်။ သူတို့ကလှည့်ကွက်နှင့်အတူကညှဉ်းဆဲ။ ရဲဘက်ခြမ်းတွင်ကြီးမားသောပြင်သစ်ပညာရှင် Georges Conan ကသူ၏စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။
The Swing - လူနာများ၊ လူနာအားလုံးသည်သူတို့၏ကျောနောက်ဘက်၌လက်ထိပ်ခတ်ထားပြီးအဝတ်အချည်းစည်း ရှိ၍ အလင်းရောင်မရှိသောအခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင်သံချောင်းများအားတင်းကြပ်ထားသည့်ခြေချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်အပြန်အလှန်ချည်ထားသည်။ pincers နှင့်ကျယ်ပြန့်ဆိတ်ကွယ်ရာပေါင်။ ထို့နောက်တစ်ခုသည် 8 ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် 10 မီတာအထိရှည်လျားသောရွေ့လျားနေသောရွေ့လျားမှုကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ အဆုံးတစ်ခုစီတွင်ရဲအရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သည်ရှည်လျားပြီး ၁ မီတာရှည်သောတင်းကျပ်သောသုတ်ကြိုးနှင့်လက်နက်ပါသည့်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၊ မျက်နှာ၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံးများကိုအထူးရည်ရွယ်သည်။ သွေးသည်နံရံများပေါ်သို့ပျံ့နှံ့သွားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ထိုလူသည်သတိလစ်နေလျှင်သူ၏မျက်နှာ၌ရေပုံးတစ်ပုံးနှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်။ ထိုသူသည်သီးခြားစီဖြစ်နေသောအခါသေဆုံးနေသည်။ ငါတို့သည်နောက်လာမည့် ...
မနက်သုံးနာရီခန့်တွင်စစ်တပ်မှထရပ်ကားတစ်စီးအားသင်္ချိုင်းဂူသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အကျဉ်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုတွင်းနက်ထဲ၌အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်သွေးထွက်သံယိုဖြင့်မြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ကံဆိုးသူတစ် ဦး အသက်ဆက်ရှူနေပါက၊
ဘိလပ်မြေဗန်း - အကျဉ်းသားများ၊ အဝတ်အချည်းစည်းများ၊ ဘိလပ်မြေဗန်းများ၌ရေခဲရေခဲဖြင့်နှာခေါင်းအတွင်းရက်များနှင့်ရက်ပေါင်းများစွာထိုင်နေကြရသည်။ တိုးတက်လာသောလျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးစနစ်သည်လက်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတင့်ကားများရှိရေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေသည်။ ညတွင်ကြိမ်ဖန်များစွာထောင်ထဲမှတစ် ဦး သည်“ ပျော်စရာအတွက်” မီးစက်ကိုဖွင့်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပြည်သူများအားအေးခဲစေသောအပြစ်စီရင်ခံရသောငိုကြွေးသံများကိုကြားရသည်။ ကံမကောင်းစွာ, သူတို့ရဲ့ဘိလပ်မြေဗူးထဲမှာ, အရူးသွားပါ ...
« ဟုတ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် Manengouba (Nkongsamba) ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရေးစခန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေခဲ့တာပါ။ »
"သူတို့က 300 400 လူတွေမှာ 000 ကိုသတ်ခဲ့တယ်။ တကယ့်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု။ သူတို့ဟာပြိုင်ပွဲကိုဖျက်စီးပစ်လိုက်တယ်။ အလိုအလျောက်လက်နက်များဆန့်ကျင်စစ်ကိုင်း။ Bamileke လူတွေမှာအခွင့်အရေးမရှိဘူး။ ရဟတ်ယာဉ်မှူးမက်စ်ဘာဒက်က "ဒီတီးလာနဲ့တူတယ်။ ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကကင်မရွန်းနိုင်ငံသားတွေကြားဖူးခဲ့တဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုဒီဝါကျတွေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်။ Francois-Xavier Verschave ကပြောပါတယ်။ ငါကပိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာကြောက်မက်ဘွယ်သောနေဆဲ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်အဖြစ်, ဒါဟာမလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ မပြီးသေးဘူး "
Bamileke လူမျိုးများသည်ယနေ့တိုင်အလွန်စိတ်ထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာပြင်သစ်သူမ၏အပြစ်ရှိကြောင်းအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ် ?
Brice Nitcheu ရဲ့အစီရင်ခံစာ « Bamileke နိုင်ငံရှိပြင်သစ်စစ်တပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး - ပရိုဂရမ်ရေးလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရာဇဝင်» (သမိုင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်)ဘယ်သူပြင်သစ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုရွံရှာလာလိမ့်မယ်။
 ကင်မရွန်းတွင်လူမျိုးစုခွဲခြားခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ Bamileke ၏ဖြစ်ရပ်။ Yaoundé, CRAC, 1995, p ။ 16
 francafrique (1958 - 1998) "သမ္မတနိုင်ငံအရှည်ဆုံးအရှုပ်တော်ပုံ" François-Xavier Verschave
မာစတာ Omraam Mikhael Aivanhov ၏သွန်သင်ချက် (ဗွီဒီယိုများ)